बिभेद बिरुद्ध जन्मिएको कविता संग्रह ‘एक आलोक अनेक तरंग’ – Sadarline
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ सदस्य हरिप्रसाद तिमिल्सेना यस क्षेत्र कै छन्द शैलीमा कविता लेख्ने थोरै साहित्य मध्येका एक हुन । भेरी साहित्य समाजका अध्यक्ष रही साहित्यका क्षेत्रमा सक्रिय रहेका तिमिल्सेनाले अहिलेसम्म चारवटा साहित्यीक कृती प्रकाशन गरि सकेका छन् । यसै मध्ये एक हो ‘एक आलोक, अनेक तरंग’ । समाजमा रहेको बिकृती, बिसंगती र बिभेदका बिरुद्धमा लेखिएको सो कविता संग्रहका बिषयमा तिमिल्सेनासंग सदरलाइनडटकमका लागि कमल डाँगीले गरेको ३ प्रश्न र त्यसको जबाफ ।
१) यस पुस्तक किन लेख्नुभयो ?
–हाम्रो समाज वरपर रहेका बिकृती, बिसंगती, समाजिक बिभेद प्रत्येक्ष रुपमा देख्न पाइयो । सानैदेखि यस्ता बिभेदहरु अरुले सहेको देख्दा पीडा बोध हुन्थ्यो । यस्तो किन हुन्छ होला भनेर मनमा सोचहरु आउथे । अहिले ठूलो हुंदा समेत त्यस्ता बिकृतीहरु अन्त्य हुन नसकेका छैन्नन् । त्यस्ता सामाजिक बिभेद अन्त्य गनृ साहित्य क्षेत्रबाट पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्यो । मैले समाजिक बिभेद झल्काउने र त्यसका बिरुद्धमा समाजलाई जागरुक बनाउन कविता संग्रह प्रकाशन गर्ने निचोढ गरे । मेरो कविता संग्रहले सामाजिक बिभेद गर्नेलाई झापड नै हानेको छ र बिभेद सहनेलाई न्याय दिने आवाज उठाएको छ ।
२) तपाईको यो पुस्तक पाठकले किन पढ्ने ?
–सामाज परिवर्तन हुनुपर्छ । यथास्थितीमा रहनु हुदैन । त्यसकारण समाजिक बिकृती र बिभेदका बिरुद्ध आवाज उठाउनेहरुले यो कविता पढ्न सक्छन् । धेरैले यसलाई पढेर राम्रो रहेछ पनि भन्नुभएको छ । बांँके र बर्दिया लगायत क्षेत्रका साहित्य प्रेमीहरुको हातमा यो कविता पुगेको छ । परिवर्तनको आवाज मात्र नभई अझ छन्द शैलीमा लेखिएको कविता भएकाले पढ्नेलाई राम्रो पनि लाग्नेछ । कुनै अन्यौलमा नपरी पाठकहरुले मिठो शैलीमा लेखिएको कविताका माधयमबाट देशमा रहेको बिभेद र त्यसलाई हटाउन सकिने उपायका बिषयमा जान्न सक्छन् ।
३) पुस्तक लेख्ने प्रेरणा कहाबाट आयो ?
–बच्चैदेखि म बिद्रोही स्वभावको मान्छे । प्रगतिबादी सोंच भएको छ । समाज परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने । जन्मथलो देलेखदेखि बर्दियाको थारु समुदायसम्म आईपुग्दा ती समुदायमा हुने बिभेद देखिरहेको थिए । पहाड होस् चाहे तराई बिभेदको श्रृंखला छदैछ । त्यो हटाउनुपर्छ भन्ने सोंचमा म थिए । र यो हटाउने माध्यम साहित्य मात्र पनि प्रमुख माध्यम हुन सक्छ भन्ने लागेर मैले कविता लेखेको हु । समाजमा रहेको बिभेदका बारेमा धेरै जना जागरुक हुनुभएको छ । अशाा गरौं साहित्यका माध्यमबाट समाज परिवर्तन गर्ने उदेश्य कति सफल हुन्छ ।
सदरलाइनडटकम २३ साउन, नेपालगन्ज : बाँंकेमा गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक अपराध र लागू औषधका मुद्दा सर्बाधिक बढी रहेको बाँके प्रहरीले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । सार्वजिनक अपराधमा २८४ र लागू औषधमा १३७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा सार्वजनिक अपराधमा ८४ र लागु औषधमा ५९ […]
४ असार २०७५, सोमबार १२:५१
१४ बैशाख २०७९, बुधबार १४:४७